Mogadishu Journal » 2021 » May » 11
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay go’aankii saakay kasoo baxay dowlada Kenya ee ku joojisay dhamaan duulimaadyadii Soomaaliya uga imaan jiray iyo kuwa Kenya ka bixi jiray marka laga reebo diyaaradaha Qaramada Midoobay iyo kuwa gar gaarka. Wasiirka Gaadiidka iyo...
Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ee maamulka Koonfur Galbeed gaaray Wakiilo katirsan beesha caalamka oo hogaamineysay Kuxigeenka Koowaad ee wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobey Uqaabilsan Arimaha Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed...
Dowlada Soomaaliya ayaa codsi u dirtay Waddamada ku bahoobay Bariga Afrika ee marka loo soo gaabiyo loo yaqaan EAC si ay xubin buuxa uga noqoto ururkaasi ay ku mideesan yihiin dhowr wadan. Xoghayaha cusub ee Waddamada ku bahoobay Bariga Afrika Dr Peter Mathuki, ayaa ka hadlay...
More than 20 Palestinians killed in Israeli strikes on Gaza after security forces’ crackdown on Jerusalem worshippers. 11 May 2021 The Israeli military renewed its bombardment of the beleaguered Gaza Strip on Tuesday morning, targeting several areas after rockets were fired from...
Dowlada Kenya ayaa saakay oo talaado ah hakisay diyaaradaha rakaabka ee ka taga Soomaaliya una duuli jiray dalka Kenya, marka laga reebo diyaaradaha ay isticmaalaan Qaramada Midoobay iyo kuwa sida gar gaarka. War kasoo baxay Hay’adda duulista Hawada ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay Magaalada Kambaala ee Caasimadda Dalka Uganda. Madaxweynaha ayaa halkaas kaga qayb gelaya xafladda caleemo-saarka Madaxweynaha dalka Uganda...
Xukuumada federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in ay xayirtay lacag malaayiin dollar ah oo loogu deeqay maamulka Hirshabelle looguna tala galay wax looga qabto fataahada Wabiga Shabelle. Madaxweynihii hore ee Maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa qoraal uu soo...
Khaad laga soo dhoofin rabay Kenya oo la joojiyay iyo Ganacsato ku khasaartay
Ganacsatada Khaatka ee Kenya ayaa sheegay inay ku hungoobeen soo celinta xiriirka uu dalkooda la leeyahay Soomaaliya, iyagoo filayay in khaadkooda ay u dhoofin karaan Muqdisho. Khaad loo dhoofin rabay Soomaaliya ayaa lagu soo warramayaa in uusan gaarin halkii loo waday, sida ay...
Markab Dagaal oo Mareykanka leeyahay oo Madaafiic badan ku riday Dooman Iran leedahay
Markab kamid ah kuwa ilaaliya badaha oo leedahay dowlada Mareykanka ayaa madaafiic badan oo digniin iyo cabsi galin ah ku riday dooman nuuca dheereeya ah ay leeyihiin ilaalada kacaanka Iran. Wasaarada Difaaca Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ayaa sheegtay in 13 doon oo nuuca...